China mvura pfapfaidzo yekudzivirira kudzora fekitori uye vagadziri Dingtaisheng
Chengeta huwandu hwakaringana hwemvura pazasi peiyo retort. Kana zvichidikanwa, chikamu chemvura ichi chinogona kubayiwa jekiseni roga pakutanga kwekudziya. Kune zvigadzirwa zvakapisa-kuzadza, chikamu ichi chemvura chinogona kufuridzirwa kutanga mutangi remvura inopisa wozojowa. Munguva yese yekuvhara mbichana, chikamu ichi chemvura chinotenderera chakatenderedzwa nepombi kuburikidza nepombi yekuparadzira mvura nemabhomba akagoverwa mukudzosera, uye mvura inosaswa muchimiro chemhute uye zvakaenzana zvakagoverwa mukutsiva kupisa chigadzirwa. Izvi zvinoita kuti kuve nekuparadzirwa kwekupisa.
Zvadaro: Cascade kudzokorora
Kudya Mvura Steam Spray Autoclave Sterilization Retort
Madiki Mvura Spray Sterilization Retorts